Fambolen-kazo: Ho Tany maitso i Madagasikara
mercredi, 15 janvier 2020 08:51
Malaza moa ny hoe "Madagascar l'Ile rouge", satria dia tany mena avokoa ny toerana rehetra, kaohon'ny riaka daholo ny havoana, mamovoka ny toerana rehetra, mirongatra ny aretina samihafa entin'ny voalavo sy biby samihafa.
Maro ireo ala harovana, fa mifandona amin'ny fahantran'ny mponina, ka lasa toerana fihariana, na fambolena, na fihazana, na fitrandrahana harena ankibon'ny tany, na lasa fanaovana harina fandrehitra, saribao sy kitay. Ao koa anefa ny filana hanaovana trano, toy ny bois rond, bois carré sy planche.
Ao no misy ny harena sarobidy toy ny bois de rose, bois d'ébène, palissandre sy ny maro hafa. Ao ny fanaovana fanafody.
Ary ao ny toeran'ny biby tsy fahita maneran-tany. Ao ireo toerana mananan-tantara sy vakoka, ary ara-kolotsaina. Ao ireo mampidi-bola amin'ny fizahantany.
Atao ahoana ary ny hampiarahana ireo filana mety mifanohitra rehetra ireo, nefa samy fivelomana avokoa.
Anisan'ny fototry ny fampandrosoana ny fahaizana mitsinjara ny tany (aménagement du territoire)
- 20% manantompo 117 400 km² = 11 740 000 ha
- 5% fambolena efa misy = 29 350 km² = 2 935 000 Ha (3.5% fotsiny no misy fambolem-bary amin'izao)
- 10% toeram-ponenana, milieu d'habitation
- 20% ambolena hazo sy voankazo, ahitra maitso, ala arovana
- Ny Fambolena akarina 25% ka ho lasa 30% miaraka amin'ilay 5% efa misy voly amin'izao.
- Tany zaraina 5% = 29 350 km² = 2 935 000 Ha =29,35 milliard m², samy mahazo 1000m² isaky ny Malagasy
- Tany lovain'ny taranaka 15%
Raha 20% no ambolena hazo sy voankazo ary ahitra maitso, ala arovana, dia 587 000 km² x 20% = 58 700 000Ha x 20% = 11 740 000 Ha no ambolena hazo.
Ny 1Ha dia mila hazo 1000 fototra eo raha toa ka elanelanina 3m ny foto-kazo iray amin'ny toerana tsy dia be rano.
Hanome antsika eo amin'ny zanakazo 12 miliara fototra ho volena izany.
Ka raha tsinjaraina amin'ny 25 000 000 Malagasy dia samy mamboly 500 zanakazo. Izany hoe zanakazo 6 isan-kerin'andro no tsy maintsy volen'ny olona iray ao anatin'ny 2 taona. Ka na izy no mamboly azy, na manarama na manome ny sarany fambolena izany izy.
Ireo tsy manana asa rehetra dia ampidirina Service National. Ampiasaina ireo Service National, ka dia misy ampahany amin'izy ireo no isahana fotsiny izay fambolena hazo sy voankazo izay.
Azo atao, ary efa misy ihany koa ny fampiasana ny teknolojia fambolena hazo avy eny ambony fiaramanidina ka misy karazana fusée kely mitifitra manatsatoka ilay zanakazo.
Ilaina anefa ny misafidy ny zanakazo ambolena mba tsy izy indray no hitroka ny rano izay ilaintsika amin'ny fambolena sy fiompiana ary ny rano fisotro.
Ny manamorina ny lalana rehetra izay amboarina dia tsy maintsy ambolena hazo ny 500 m rehetra miala amin'iny lalana iny, tsy azo anorenana trano.
Ampiasaina ireo efa mpamboly pépinière efa misy ankehitriny. Asiana ny toerana fambolena masomboly (pépinière) ka ho matianina no misahana azy, izay hiteraka asa fihariana maro tokoa, atsaraina ny fikarohana momba ireny voankazo sy ala ireny, atosika ny sampana mpikaroka eny amin'ny Université.
Raha 100 ariary no kajiana laniana amin'ny vidin'ny zanakazo, ary 100 ariary ihany koa ny fambolena azy, ary 200 ariary no omena amin'ny fikarakarana azy herintaona, ka azo omena izay olona vonona hanao fihariana aminy, akoatran'ny anjarany izay voleny, dia 400 ariary no ilaina isan-kazo.
12 miliara fototra no tanjona ho volena ao anatin'ny 2 taona. Mila vola 4 800 miliara ariary izany na 1.6 milliards de dollars eo izany mandritra ny roa taona.
Azo atao tsara ny mamboly hazo azo anaovana trano, izay ampidi-bola, azo ahondrana rehefa navadika ho planche na bois carré, toy ny pain.
Azo jerena ihany koa ny fitrandrahana ny bois de rose, bois d'ébène, palissandre, izay atao asa madio fa tsy antsokosoko.
Azo omena ireny mpanao asa-tanana sy fanaka sarobidy ireny, fandriana iray vita amin'ny bois de rose dia misy sahy mividy azy 6 millions de dollar any ivelany.
Ilaina anefa ny fitsinjovana ny hazo azo kapaina sy ny mety amidy. Harenantsika ireo, afaka avadika vola ho fanasoavana ny maro. Izay manapaka hazo, izay asiana fepetra ny habehany sy ny haavo azo tapahina, dia mamboly hazo 10 asolo azy.
Raha mila 2 milliards de dollar izany isika dia rakotra ala ny Firenentsika ao anatin'ny 2 taona fotsiny, dia bois de rose 600 conteneurs no ilaintsika ahazoana izay vola izay. Marihina fa 2000 conteneurs no nahondrana antsokosoko nanomboka ny 2009 no mankaty.
Soloina éthanol ny charbon, iverenantsika manokana ity lohahevitra ity, ny azo ambara sahady, dia maniry fary avokoa manerana ny Madagasikara, ary ho lasa fihariana mampidi-bola ho an'ny tantsaha ny fambolena fary marobe. Isika rahateo mahay manamboatra toaka gasy, izay tsy tokony enjehina intsony, ny éthanol dia toaka gasy fa asiana colorant sy amerisant, na lokoina sy asiana zavatra mafaitra tsy azo hisotroina azy intsony.
Vatsiana fatana éthanol vita malagasy ny 5 000 000 tokatrano eto Madagasikara, ampiroborobo ny indostria izany. Ny fihariana charbon, fanamboarana azy, ny fitaterana, ny famarotana, dia ampiana hivadika hanao fihariana éthanol, izay mahasolo tanteraka, sady mora vidy kokoa noho ny charbon, no manaja ny tontolo iainana.
Ny Crédit Carbonne omen'ny sampan-draharaha iraisam-pirenena amin'ny fiarovana ny tontolo iainana dia efa mahaloa ny lany amin'io fatana io, izay zaraina amin'ny isan-tokatrano.
Ampiana ireo mpamboly zatra manao tavy hanao fomba fambolena hafa, ary faizina mafy ireo mpandoro tanety.
Tsy maintsy apetraka ny Tafika miaro ny ala sy ny pompier mpamono afo vokatry ny firehetan'ny ala. Mazava ho azy, ny pompier an-drenivohitra sy an-tanàna dia hisy asa lehibe atao amin'izany. Ireo Service National dia misy ampahany ampanaovina io asa pompier io, na an'ala na an-tanàna.
Vatsiana fitaovana toy ny "canadair" na hélicoptère ireo Tafika mpiandry ala.
Asiana toeram-piofanana momba ny ala.
Omena lanja ny fanamboarana fanafody azo avy amin'ny zava-maniry eto an-toerana, jerena ny anampiana ireo mpikaroka sy mpanao raokandro ary ny industrie pharmaceutique sy homeopharma ireny.
Madagasikara dia atao tanjona ny fambolena bio, ka tandremana tokoa ny fampidirana ny hazo na masom-boly sy fambolena ny OGM eto amintsika, tsy manakana ny fikarohana sy fanatsarana ny fambolena afaka miaro tena amin'ny hain-tany sy ny bibikely anefa izany.
Tanjona lehibe azo tanterahina tsara izany no ahamaitso an'i Madagasikara ao anatin'ny roa taona rehefa mandray ny andraikitra ny rehetra, Malagasy iray tsy maintsy mamboly hazo iray isan'andro.